अपहणमा संलग्न पूर्वआईजीपीले मलाई पक्रेर क्षत्री-बाहुन पुलिस लगाए
नवराज कुँवर काठमाडाैं, १८ वैशाख
वैशाखको घामले दिन जति तातेको छ, त्योभन्दा ज्यादा लकडाउनको अवधिमा नेपाली राजनीति तातेको छ । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि रातारात तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीले एकता गरी जनता समाजवादी पार्टी जन्माएका छन् । सत्तारूढ नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री परिवर्तनको बहस चलिरहेको छ । यही बेला समाजवादी पार्टीका नेता डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण शैलीमा धनुषाबाट काठमाडौं ल्याइएको प्रकरणले सडकमा नाराजुलुसको परिस्थिति पैदा गरेको छ । मंगलबार साँझ सरकारी वकिल कार्यालयअगाडि सत्तापक्ष र जनता समाजवादी दलका कार्यकर्ताहरूले एकअर्काविरुद्ध नाराबाजी गरे । लकडाउनको अवधिमा भएका यस्ता गतिविधिलाई लिएर धेरैले दुवै पक्षको आलोचना गरिरहेका छन् । यद्यपि, सत्तापक्षलाई नैतिकताको पाठ सिकाइरहेको जनता समाजवादी पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ता लकडाउन उल्लंघन गरी नाराजुलुसमा उत्रिए । प्रस्तुत छ, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र यसले निम्त्याउन सक्ने परिस्थितिबारे जनता समाजवादी दलका नेता आङकाजी शेर्पासँग शिलापत्रका नवराज कुँवरले गरेको कुराकानीको सम्पादिश अंश :
लकडाउनमा पनि दौडादौड गरिरहनुभएको छ, तपाईंहरूलाई काेराेनासँग डर लाग्दैन ?
काेराेना हाेइन, त्याेभन्दा बढी सरकारसँग डराएरचाहिँ दौडादौड गरेका हौँ । सबै मानिस घरभित्र बसेका बेला बाहिर निस्कनु हाम्रो रहर होइन ।
किन डराउनुभा‘को सरकारसँग ?
अघिल्लो साता के–के भयो, तपाईंलाई थाहै होला । देश कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला सरकारले विपक्षी दल फुटाउने षड्यन्त्रसहित विधेयक ल्यायो । सरकारको कदम यतिमै सीमित रहेन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले सांसद महेश बस्नेत, पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालसहितको टोली लकडाउनका माझ धनुषा पठाएर हाम्रो पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरी काठमाडौं ल्याउनुभयो । पार्टीभित्रैबाट अप्ठेरो पर्न थालेपछि तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउन सके आफू शक्तिशाली बन्छु भन्ने ओलीलाई लागेको थियो । त्यसैले उहाँले कुत्सित मनशायबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । अनि हामी नडराएर के गर्नु त ?
प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश नल्याइदिएको भए न राजपासँग तपाईंहरूको मिलन हुन्थ्यो, न त तपाईंहरूले वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आफूलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्थ्यो । तपाईंहरूलाई त फाइदा पुग्यो नि, होइन र ?
राजपासँग एकीकरण गर्ने छलफल निष्कर्षोन्मुख नै थियो । हामी लकडाउन खुलेपछि एकीकरण गर्ने योजनामा थियौँ । प्रधानमन्त्री ओलीजीका कारणले रातारात मिल्न बाध्य भइयो, यो सत्य हो । तर, उहाँले हामीलाई मिलाउन नभई फुटाउन विधेयक ल्याउनुभएको थियो । हामी र हाम्रा नेताहरूले विवेकले काम लिए ।
भनेपछि प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि थुप्रै प्रश्न उठे होइन त ?
उहाँले अनैतिक, अराजनीतिक र अशोभनीय काम गर्नुभएको छ । उहाँको राजनीतिक जीवनमा यो एउटा दागका रूपमा रहनेछ ।
अरुलाई नैतिकताको पाठ पढाउँदै गर्दा आफूले चाहिँ नैतिकताको ख्याल गर्नु पर्दैन ? लकडाउनका माझमा सरकारी वकिलकाे कार्यालयअगाडि किन दलबलसहित नाराबाजी गर्नुभयो ? कि अरुले गरे बेठीक, तपाईंहरूले गरे ठीक ?
म यो कुरा स्वीकार्छु कि जुन ढंगले हाम्रो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाट लकडाउनका बेला नाराजुलुस भयो, यो दुःखद छ । यस्तो हुनु हुँदैन थियो । नैतिक रूपमा हामीले यो कुरा स्वीकार्नैपर्छ । तर, यस्तो परिस्थिति बनाएको सरकारले नै हो । सांसद सुरेन्द्र यादवले आफूलाई केही सोच्न पनि नदिई धनुषाबाट रातारात काठमाडौं ल्याइएको भनिसक्नुभएको छ ।
महेश बस्नेत त सांसद भए, अर्का सांसदलाई भेट्न गए होलान् वा केही राजनीतिक गफगाफ वा यस्तै केही थियो होला । पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई किन पठाइयो ? अहिले उसको हैसियत के हो ? यो अपहरण नै हो भन्ने छर्लङ्ग छ । तर, न प्रहरीले हाम्रो उजुरी लियो, न त सरकारी वकिल कार्यालयले नै । त्यसैले हामी सरकारविरुद्ध नाराबाजीमा उत्रिएका हौँ । जनताको जिउज्यानको रक्षा गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने बेला अर्काको घर भत्काउने, सत्तामा टिकिरहन जुनसुकै हदसम्म गिर्ने ओलीजीको प्रवृत्तिले हामीलाई सडकमा तानेको हो ।
दुई ठाउँमा तपाईंहरूको जाहेरी अस्वीकार भइसकेको छ । अझै धाउन छाड्नुभएको छैन । अझै कहाँ–कहाँ धाउने हो ?
३ वटा विकल्प हाम्रा अगाडि छन् । कुनै प्रहरी कार्यालयले जाहेरी लिएन भने त्योभन्दा एक स्टेपमाथि हामीले जाहेरी दिन सक्ने रहेछौँ वा सीडीओ कार्यालयमा दिन सकिने रहेछ । त्यहाँ पनि भएन भने परामदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिन सकिने रहेछ । हामी यी ३ वटै विकल्पमा जान्छौँ ।
त्यहाँ पनि तपाईंहरूको जोहरी वा निवेदन लिइएन भने नि !
हामी विरोधका कार्यक्रम लिएर सिधै सडकमा जान्छौँ । सदन र सडक हाम्रो अन्तिम विकल्प हो ।
महेश बस्नेत र सर्वेन्द्र खनालले अपहरण गरेको हुँदै होइन भनेका छन् । तपाईंहरू हो कि हो भनेर जाहेरी दिन खोज्दै हुनुहुन्छ । रिस त साँध्नुभएको होइन नि ?
उहाँहरू त कहाँ स्वीकार्नुहुन्छ ! यस्तो घिनलाग्दो काम गरेको भनेर कसले स्वीकार्ला ? तर, वास्तविकता त यही हो । सवेन्द्र खनालजीको विगत हेरौँ न, उहाँ आईजीपी हुँदाका धेरै आपराधिक घटना रहस्यको गर्भमै छन् । गायिका र प्रहरी महिलाबीच विवाद भएको फुटेज बाहिर निकालेर गायिकालाई समात्न लगाउने उहाँले ३३ किलो सुन तस्करी भएको फुटेज खोइ देखाको ? अपराधीलाई आफूले ठीक लगाएको दाबी गर्ने उहाँले निर्मलाको हत्यारा खोइ पत्ता लगाको ?
अहिले पनि अख्तियारमा उहाँविरुद्ध करोडौँ घोटालाको मुद्दा छ भन्ने सुनेको छु । ती कर्तुतबाट जोगिन अख्तियारकै आयुक्त बनेर जाने दाउमा उहाँ सांसदको अपहरणजस्तो अपराध गर्नसम्म पछि पर्नु भएन । यसबाट थाहा भइहाल्यो नि, उहाँकाे पालामा भएका काण्ड किन किनारा लाग्न सकेनन् ।
सर्वेन्द्र खनाल काठमाडौं प्रहरी प्रमुख हुँदा तपाईंले २०/२१ दिनसम्म हिरासतमा मच्छेडको टोकाइ सहनुपरेको थियो, होइन त ?
टिकापुर घटनामा आदिवासी, जनजातिको पक्षमा टिप्पणी गर्दा मलाई साइबर क्राइमको मुद्दा लगाइएको थियो । सर्वेन्द्र खनालले मलाई पक्राउन पेस्तोलसहित सिभिल प्रहरी खटाएका थिए । पक्राउपछि पनि अदालतमा म्याद थप्न लाँदा छेउछाउमा क्षत्री बाहुन मूलका प्रहरी मेसिनगनसहित राखेर लगेका थिए । कम्तीमा एउटा आदिवासी, जनजाति समुदायको प्रहरी मेरो अगाडि राखिदिएको भए मलाई राहत महसुस हुन्थ्यो ।
क्षत्री बाहुनदेखि त्यस्तो डर लाग्छ ?
मैले कसैलाई दोषारोपण गर्न वा उनीहरू नस्लमा प्रश्न उठाउन खोजेको होइन । म आदिवासी, जनजाति समुदायको उत्थानका लागि होमिएको अभियन्ता हुँ । त्यसैले उनीहरूका लागि म र मेरा लागि उनीहरू एकअर्काका आत्मबल हौँ ।
खैर, तपाईंको व्यक्तिगत शैली र आचरणमा म एकछिनमा केही प्रश्न गर्छु । अहिले चाहिँ पार्टीबारे कुरा गरौँ । राजपा र समाजवादी त मिले । तर, सबैभन्दा ठूलो नेकपाभित्र भुसको आगो सल्किइरहेको देखिन्छ, कसरी हेरिरनुभएको छ ?
अरुको घर भत्काउन खोज्दा आफ्नै घर भत्किने अवस्थामा पुग्यो । ओलीजीलाई नेकपाले अझै अढाई वर्ष प्रधानमन्त्रीकै रूपमा छाडिदिने हो भने अर्को चुनावबाट नेकपा दन्ते कथामा सीमित हुन्छ । उहाँका कारण नेकपा मात्र होइन, सिंगो गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै धरापमा परेको छ । मन परेकालाई जुनै स्तरमा उत्रिएर जोगाउने, मन नपरेकालाई समातेर थुन्न लगाउने, शक्तिमा रहन जस्तोसुकै कुकृत्य गर्न पछि नपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनैपर्छ ।
भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग तपाईंहरूको चित्त फाटेको छ ?
हाम्रो मात्र होइन, उहाँकै पार्टीका नेताहरूको समेत चित्त फाटेको छ । उहाँलाई भोट हाल्ने जनताको चित्त फाटेको छ । आम नेता तथा कार्यकर्ताको चित्त फाटेको छ ।
नेकपाभित्र ओलीको राजीनामा माग भइरहेको छ । ओलीले राजीनामा दिए भने त्यसपछि बन्ने सरकारमा तपाईंहरू जानुहुन्छ त ?
ओली पदलोलुप हुनुहुन्छ, उहाँ नैतिकताको ख्याल नै गर्नु हुन्न । उहाँले यति सजिलै राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने त लाग्दैन । तर, राजीनामाका लागि अविश्वासको प्रस्तावसम्मको प्रक्रियामा जाने स्थिति बन्यो भने जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा भोट हाल्छ । सरकारमा जाने/नजाने भन्ने तपसिलका कुरा हुन् ।
विगत खासै राम्रो छैन । त्यतिबेलासम्म तपाईंहरूको पार्टी नै फुट्ने हो कि !
मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, हामी एकीकरणको प्रक्रियामै थियौँ । अलि छिट्टो एकता गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो । हाम्रो एकता निहित स्वार्थका लागि हुँदै होइन । यो एकता तमाम मधेसी, आदिवासी, जनजातिलगायत हिमाल र पहाडका जनतासम्म पुग्ने र उनीहरूको मुद्दा वहन गर्ने उद्देश्यले प्रेरित छ । त्यसैले फुट्ने कुरै छैन, बरु हामीसँग मुद्दा मिल्ने अरु साना दलसँग एकता हुन सक्छ ।
नयाँ पार्टीमा भएका नेताहरूको विगत हेर्दा पदका लागि लुछाचुँडी र झगडा गरेका दृष्टान्त धेरै छन् । यस्तो विगतबाट आएका नेता र पार्टीको नेतृत्व कसले गर्छ ?
हाललाई महन्थ ठाकुरजीको नेतृत्व रहने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसपछि डा. बाबुराम भट्टराई अनि अरु नेता हुने गरी पार्टीभित्र एक खालको समझदारी बनेको छ । यसो भनिरहँदा जिम्मेवारी र अधिकारका हिसाबले शीर्ष नेताहरू बलियो हुनुहुनेछ । अझै घनिभूत छलफल भइरहेकै छ । पद, जिम्मेवारी र अधिकारका आधारमा कार्यविभाजन हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीका कारण तपाईंहरू ठ्याप्पै मिल्नु’भो हगि ?
हामी मिल्यौँ तर प्रधानमन्त्रीका कारण होइन, आफ्नै प्रयासका कारण । उहाँले फुटाउन चाहनुभएको थियो, हामीले मिलेर देखाइदियौँ । उहाँको अनैतिक र अराजनीतिक कदमलाई दुनियाँका सामु छर्लङ्ग पारिदियौँ ।
शेर्पाजी, तपाईंले नैतिकता भन्ने शब्द थुप्रै पटक उच्चारण गर्नुभयो । तर, तपाईं आफैँचाहिँ साह्रै विवादित व्यक्ति हुनुहुन्छ । तपाईंको स्वभाव रुखो र शैली तथा व्यवहार अराजक भन्छन् त !
हेर्नुस्, म राजनीतिक व्यक्ति कम र अभियन्ता बढी हुँ । शेर्पाको छोरा हुँ, शोषित, पीडित समुदायको उत्थानका लागि अभियान चलाएर हिँडेको मान्छे हुँ । डिप्लोम्याटिक कुरा गर्न मलाई पनि आउँछ । तर, यस्तो शैलीमा राज्यले कुरा सुन्दैन । आदिवासी, जनजातिहरूका मुद्दामा म खरो नै छु । कसैले अराजक भन्लान्, कसैले रुखो भन्लान्, यी उनीहरूको बुझाइअनुसार प्रयोग हुने शब्द हुन् ।
बोली त कडा भयो रे, व्यवहारमै चाहिँ ३ सय वर्षअगाडिका पृथ्वीनारायण शाहलाई थुकेर तपाईंले के पुष्टि गर्नु खोज्नुभएको ?
मेरा पुर्खालाई थिचोमिचो गर्ने र उनीहरूका अस्तित्व मेटाउन खोज्ने व्यक्तिलाई म पूजा गरौं ?
नेपालमा तपाईं एउटा मात्र जनजाति नेता हो र ? नेकपाभित्र छन्, कांग्रेसभित्र छन्, राप्रपा भित्र पनि छन् नि !
उनीहरूसँग मैलेजसरी बाेल्न सक्ने हिम्मत पनि हुनुपर्‍याे नि ! मैले जसरी बोल्दा अवसर पाउनु त टाढाकै कुरा हो, भएको पद पनि गुम्छ । शेरधन राई, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सुवास नेम्बाङ, नन्दबहादुर पुन, वर्षमान पुन थुप्रै छन् जनजाति नेता । उनीहरू आदिवासी, जनजातिको मुद्दाका लागि होइन, पद र पावरका लागि संघर्षरत छन् । म उनीहरूभन्दा पृथक छु । उत्पीडित समुदायको हकहित रक्षाका लागि पदलाई गौण ठानेर अघि बढ्छु ।
यसरी बोल्दा धाकधम्की त आउँछ होला नि ?
आउँछ । नेपालबाट मात्र होइन, दुबई, कतारदेखि अस्ट्रेलियासम्मबाट आउँछ । अस्ट्रेलियाबाट ज्यान मार्ने धम्की दिने एउटा भाइलाई त्यहाँको पुलिसमा रिपोर्ट गरेर माफी माग्न लगाएको थिएँ । धेरैतिरबाट ज्यान मार्ने धम्की आउँछ । अर्कातिर, सरकार, प्रहरी नै हाम्रो आवाज दबाउन उद्यत छ । त्यसैले मैले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेको छु । कतिपय आन्दोलनमा मलाई ताकेर ढुंगा प्रहार गरिएका छन् । सिभिल प्रहरीबाटै मैले आक्रमणको सामना गर्नुपरेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १८, २०७७, ११:५३:००